Somaliland: Magacyada 12 Caalim Oo Madaxweynuhu U Xushay Inay Noqdaan ‘Guddiga Culimada Qaranka’ Iyo Sheekh Dirir Oo Ka Cudur-daartay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Magacyada 12 Caalim Oo Madaxweynuhu U Xushay Inay Noqdaan ‘Guddiga Culimada...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo, oo galabta afur u sameeyey culimada dalka intooda badan, sidii caadada u ahayd sanad walba marka ay bisha ramadaan soo gasho uu madaxweynuhu kulan afur ah la yeesho culimada dalka oo isaga yimaada gobollada ay ka kooban tahay Jamhuuriyadda Somaliland.
Ujeeddada ugu weyn ee aan caadada uga dhigay, in aynu kulanno bisha barakaysan ee Ramadaan, waxay salka ku haysaa, in aynu samayno wada-tashi. Waxaan soo dhaweynayaa dhaliilaha dhabta ah, ee loo jeedinayo maamulkayga. Waxaan soo dhaweynayaa wixii talo, tusaale iyo toosin ah, ee aad kulankan iigu soo gudbiseen, kuwaas oo aad uga gol-leedihiin in wax lagu hagaajiyo.
Waxaan diyaar u ahay, in aan dhug iyo dhaymo u yeesho, dardaaranka iyo dareenka umaddayda, culimo iyo caamo intaba. Waxaa iga go’an in aan ummadayda uga tago, dhaxal wanaagsan iyo hab-dhaqan dawladeed, oo la is-toosin karo. Sidaa darteed, uma aqaan ceeb, in la saxo qaladaadka ka dhaca ama ku yimaadda maamulka dawladnimo.
Culimadiinna qadarinta mudan, walaalayaal,
Xukuumaddaydu waxay kor u qaaday xidhiidhka iyo xurmada culimada dalka, taasina waxay sababtay is-kaashi iyo wada-shaqayn weyn, oo lagaga soo gudbay duruufo badan; sida la-dagaalanka aragtiyaha xag-jirka ah, ee lagu duufsado da’yarta diinta barata. Dhinaca kale, waxa ka mid ah in ay culimadu si weyn uga qayb-qaadatay gurmadka iyo gargaarka qaran, ee loo fidinayo dadka abaaruhu aafeeyeen.
In la sii wado is-kaashiga noocan ah, waa mid aan kula dardaarmi doono, culimada iyo cidda iga dambaysa, ee aan mas’uuliyadda dalka iyo dadka ku wareejin doono. Aniga oo tixgelinaya, codsigii aad culimo ahaan ii soo jeediseen, ee ku saabsanaa samaynta guddida culimada ee dastuurka ku xusan, waxaan u magacaabay laba xubnood oo ka tirsan Golaha Xukuumadda iyo laba xubnood oo ka tirsan Golaha Guurtida, si ay u soo xulaan, una soo magacaabaan xubnaha Guddida Culimada Qaranka, isla markaana u gudbiyaan Golaha Guurtida, si ay u ansixiyaan. Farxad weyn bay ii tahay, in hawshaa la dhammaystiray muddadii aan xilka qarankan hayey.
Ugu dambayn, waxaan idinkula dardaarmayaa in aad xoojisaan midnimada iyo wada-shaqaynta culimada dhex-deeda. Sidoo kale, waxaan idin kula dardaarmayaa, in aad nagala shaqaysaan la dagaalanka bal-wadaha, fikradaha xag jirka ah, qabyaaladda iyo ka hortagga kala qaybinta bulshada. Ducada badiya, dadkana khayrka u tilmaama”.
Ugu danbayn Xubnaha ay soo xuleen culimadu waxay kala yihiin sidan:
Guddidan culimadu waxa uu noqon doonaa mid ka duuli doona qoddobka 119aad, farqadiisa 1aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland”, qoddobka 116aad (Tirada Guddida iyo muddada xilka), qoddobka 117aad (Shuruudaha Xubnaha), qoddobka 118aad(Waxyaabaha Ka Reebban Xubnaha).”
Dhanka kale, Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo ka mid ah Culimada waaweyn ee Madaxweynuhu ku daray Guddiga Culimada ee uu Shalay Magacaabay, ayaa ka Cudur-daartay inuu ka mid noqdo Guddigaasi.
Sidaana wuxuu u xaqiijiyey Wargeyska Himilo oo xalay khadka Telefoonka kula xidhiidhay.
Deg Deg: Dab Hada Ka Kacay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho + Jawiga Madaarka Iyo Xaaladiisa Guud
Somaliland: Saleebaan Cali Koore Oo Raali-gelin Ka Bixiyay Go’aankii Uu Wasiir Guri-barwaaqo Ku Joojiyay Mashruucii Lagu Tartansiinayay Golaha Wasiir Iyo Xaflad Lagu Abaal-mariyay 5 Wasiir Oo La Qabtay
Somaliland: Musharaxiinta Isbahaystay Ee Kulmiye Oo Qaadacay Shirka Golaha Dhexe